ब्वाईफ्रेन्डले भन्दा अर्काको पोइले मज्जा आउने गरि गर्दोरहेछ ! (भिडियो सहित ) – Sidha Post 24
ब्वाईफ्रेन्डले भन्दा अर्काको पोइले मज्जा आउने गरि गर्दोरहेछ ! (भिडियो सहित )
ब्वाईफ्रेन्डले भन्दा अर्काको पोइले मज्जा आउने गरि गर्दोरहेछ भनेर गायिका लक्ष्मी आचार्यले एक युटुब च्यानललाई अन्तरवार्ता दिएकी छिन् भिडियो अन्तिममा छ । त्यो भन्दा उनको बारेमा केही जानकारीहरु……. ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
गायिका लक्ष्मी आचार्य यतिबेला चर्चामा छिन् । उनले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको दुई गीत ‘मस्त जवानी..’ र ‘भिटामिन..’ अहिले दर्शकश्रोताको जनजिब्रोमा झुन्डिन सफल भएको छ । गीतको सफलताले पनि उनलाई अहिले देश बिदेशको स्टेज कार्यक्रममा ब्यस्त बनाएको छ । गायनको अलवा मोडलिङमा समेत क्रियाशील उनले आफ्ना प्रायः गीतको भिडियोमा आफै मोडलिङ गर्ने गरेकी छन् । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
मोतीनगर टिकापुर कैलालीकी आचार्यले बिगत ७ बर्षदेखि गायन र मोडलिङ एकसाथ अगाडी बढाउँदै आएकी छन् । दोहोरीबाट कलाक्षेत्रमा हामफालेकी आचार्यले तीन चर्चित लोकदोहोरी एल्बम समेत श्रोतालाई दिएकी छन् । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
छोरी भन्दा आमा तरुनी : श्रीमती छोडेर सासुआमा लिएर भागे ज्वाँई……
असल ईमान्दार लोग्ने को खोजीमा छु….. कोही छ ? भिडियो